LibreOffice 6.3 inopinda beta, hapana 32-bit rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Gwaro Foundation yakazivisa iyo Kuwanika kweruzhinji beta rweinotevera LibreOffice 6.3 kuburitswa kune ese mapuratifomu akatsigirwa.
Yechitatu huru yekuvandudza muLibreOffice 6 nhevedzano, LibreOffice 6.3, ichasvika muzhizha rino iine nyowani nyowani yekuvandudza mashandiro pamwe nezvimwe zvitsva. Kubudirira kweLibreOffice 6.3 kwakatanga munaNovember apfuura uye iyo beta vhezheni yave kuwanikwa kuti vanhu vayedze.
«LibreOffice 6.3 ichaburitswa seyekupedzisira vhezheni pakati paNyamavhuvhu 2019, iine LibreOffice 6.3 Beta 1 iri yechipiri pre-kuburitswa kubva pakatanga kuvandudzwa pakati paNovember 2018, kubvira LibreOffice 6.3 Alpha 1, 683 shanduko dzakatumirwa kunzvimbo uye 141 tsikidzi dzakagadziriswa.”Inotaurwa mukushambadzira.
LibreOffice 6.3 haichazove ne32-bit rutsigiro
Kunze kwekuvandudza uye nhau, LibreOffice 6.3 inouya neshanduko yakakosha kune vese vashandisi, Tsigiro yekuparadzirwa kwe32-bit GNU / Linux yabviswa, saka panongova nekutora-makumi matanhatu.
Kunyangwe Iyo Gwaro Senzvimbo yakatsanangura kuti 32-bit rutsigiro harubviswe, kana iwe uine LibreOffice yakaiswa pane yako 32-bit kugovera, iwe ucharamba uchigamuchira zvigadziriso zveiyo vhezheni, asi iwe haugone kuve neLibreOffice 6.3, iyo inosvika muna Nyamavhuvhu 2019.
Kusvika ikozvino, iyo LibreOffice 6.3 yekuvandudza kutenderera ichaenderera ne yechipiri beta kuburitswa pakupera kwaJune, ipapo vatatu vekupedzisira kukwikwidza (RC) muna Chikunguru. LibreOffice 6.3 ichave nematanhatu ekugadzirisa ekugadzirisa kusvikira yasvika kumagumo ehupenyu hwayo muna Chivabvu 29, 2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » LibreOffice 6.3 inopinda beta, hapana 32-bit rutsigiro
Jesu Ramirez akadaro
Ini handinzwisise mukusiya parutivi rutsigiro rwemakumi matatu nematatu ??. Izvo zvinonzwisiswa kuti tekinoroji inofambira mberi uye nhasi zvigadzirwa zvemakumi matanhatu neshanu ndizvo zvinotengeswa mumusika; asi zvinosuwisa kuti kuchine nyika zhinji umo vagari vayo vane 32-bit pachedu uye yavo PC yemhuri (senge yangu, Venezuela), uye iko kuchinja kana kutenga PC nehunyanzvi hutsva kunodhura zvakanyanya uye kana ndikati ZVAKADZIDZIRA kudhura, Ndiri kureva, kuchengetedza muhoro wako wemwedzi wega wegore rese usingashandise kana kobiri zvanga zvisingatokwanise kutenga mbeva. Nekudaro, nesarudzo idzi dzinoitwa, kuisa tekinoroji iyi parutivi, zviri kukanganisa nharaunda yevashandisi munyika dzichiri kusimukira, kunze, kunyange ndichiziva kuti vazhinji vachataura kuti makumi matatu nematatu anobva kumberi. Asi hazvina kugoverwa kweLinux kuita kuti michina iyi "yepamberi" ishande? Zvino nei ivo vachiedza kumanikidza vashandisi kuti vachinje tekinoroji nekuda kweiyo "yakaropafadzwa" yakarasika nguva? KuLINUX mune imwe ANDROID, kwaunoda michina yechizvarwa chitsva ku kukwanisa kushandisa X application?. Chikumbiro chemuhofisi senge LibreOffice chakakosha kwazvo paPC, nei ikozvino vachida kutisiya tisina iyo? ... Ini handinyatsozvinzwisisa, zvekuti isu TINOKONZESA Microsoft iyi uye Microsoft imwe, uye inoshanduka kunze kwekuti iyi kambani STILL inochengetedza vhezheni dzayo dzichangoburwa dzeMicrosoft Office yemakumi matatu nematatu… pamwe isu tichafanirwa kutamira kuGÜINDOUS, nekuti LINUX yave kuita ELITESCO ???
Pindura Jesús Ramírez
Mhoro. Ndinofunga wakarurama. Software yakaita seiyi inofanirwa kuenderera mberi nekupa rutsigiro kudzamara pasati pave nemichina makumi matatu nematatu yasara. Kurega shanduro hadzina kurongwa kushaya nguva, asi shoma basa. Ivo vano tarisa pane mashoma vhezheni uye vanogona kukura zvakanyanya uye zvirinani Asi ichokwadi kuti vamwe vane nungo kupfuura vamwe.